Menabe : Manjaka ny asan-dahalo -
AccueilSongandinaMenabe : Manjaka ny asan-dahalo
Menabe : Manjaka ny asan-dahalo
30/06/2018 admintriatra Songandina 0
Nihanahazo vahana indray ny asan-dahalo, rehefa nangingina teo aloha teo any amin’iny faritra Menabe iny. Miaina anaty tebiteby fatratra noho ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina any an-toerana amin’izao fotoana izao, isan’izany ihany ireo mpizahatany lasibatry ny fanafihana eny amin’ny lalana mandalo any Menabe, andro vitsy izay. Izay saika ho isan’andro no iharan’ny fanafihana, manginy fotsiny ny resaka halatr’omby. Notafihan’ny jiolahy tamin’izany tao amin’ny fokontany Mangamiravina distrikan’i Manja faritra Menabe, ny alin’ny alatsinainy 26 jona lasa teo. Araka izany dia fantatra fa dahalo manodidina ny roapolo isa ireo nirohotra nanatanteraka ny fanafihana tamin’io alina io. Nirofodrefotra noho izany ny poa-basy nandritry ny fandalovan’ireo andian-jiolahy nitam-piadiana nandravarava tao amin’ny tanàna. Raha ny zava-nisy, dia dahalo maro an’isa, nirongo basy no tonga nandrava io tanàna voalaza etsy ambony io. Izay raikitra tamin’izany fifandonana nandritry ny fandrobana tao an-tanàna. Noraofin’ireto farany tamin’izany avokoa raha ny tatitry ny omby miisa roa ambin’ny dimampolo. Tamin’izany no nidiran’ny fokonolona tao an-tanàna an-tsehatra, ka olona iray no maty tsy tra-drano voatifitr’ireo dahalo tamin’izany. Na dia teo aza ny fahitana ny niharam-boina dia nitohy hatrany ny finiavan’ny fokonolona hiaro ny fananany tamin’ny fanarahan-dia ireto andian-dahalo nangalatra, ka tamin’izany no nahalavoana dahalo iray tamin’ireo.
Ankoatra izay, dahalo maro an’isa ihany koa no voapaingotra teo am-panomanana hanao fanafihana ny alarobia alina hifoha alakamisy lasa teo. Nitrangana fifandonana mahery vaika tao an-toerana tamin’izany teo amin’ireo zandary niaraka tamin’ny fokonolona, sy dahalo maro nitam-piadiana tonga nanafika tao amin’ny tanana izay io kaomina io ihany. Tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana, raha naharay ny fampandrenesana ka raikitra teo indray ny fifanjevoana tamin’ireo dahalo. Resy tosika ireo olon-dratsy ary nirifatra nitsoaka avokoa tao anatin’ny fifandonana, izay voatery tsy maintsy nitifitra ny zandary, ka maty avy hatrany ny dahalo iray raha maro tamin’ireo kosa no naratra. Mbola nentin’ireo andian-jiolahy nitsoaka ihany moa ireo namany naratra mafy, ary tsy hita ny lalana nizorany. Noho ny hafanam-pon’ny fokonolona taorian’izay dia notaritarihany ilay dahalo voatifitra, ka nodoran’izy ireo avy hatrany ny fatiny.
Fanohanana ny tantsaha : Vaindohan-draharahan’ny Fitondram-panjakana
Saika tantsaha, mpamboly sy mpiompy, ny ankamaroan’ny Malagasy. Noho izay indrindra, nanambara ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lahateny nataony tamin’ny fanokafana tamin’ny fomba ôfisialy ny Foara Iraisam-pirenena eo amin’ny Fambolena omaly, fa raha miresaka ...Tohiny
Conférence des Bailleurs:TETIKASA 50 HO AN’NY FAMPANDROSOANA
Fanehoan-kevitry ny Filoha : “Tsy misy olon-kafa afaka maka ny toeran’ny Mpitsara”
Vondrona Eoropeanina : Nanome 13,5 tapitrisa Euros an’i Madagasikara